Ndị ọchịchị na-eme njem nleta nke Monaco na-anabata Onye isi ala na Onye Isi Nduzi ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » ndị mmadụ » Ndị ọchịchị na-eme njem nleta nke Monaco na-anabata Onye isi ala na Onye Isi Nduzi ọhụrụ
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akwụkwọ akụkọ Monaco • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
A họpụtala ndị otu ọhụụ, ka ọ bụrụ onye isi nke gọọmentị gọọmentị nke njem nlegharị anya nke Monaco. Maazị Guy Antognelli, onye bụbu osote onye isi na-abụ Onye isi oche ọhụụ nke Monaco njem na Oriakụ Sandrine Camia, onye na-eje ozi dị ka onye isi nke Monaco Convention Bureau maka afọ asaa gara aga, bụrụ osote onye isi.
Oriakụ Camia nwere ezigbo ahụmịhe na njem; ọ na-arụ ọrụ afọ 20 maka ụlọ nkwari akụ okomoko gụnyere Hotel Lutetia na Paris na Hotel Martinez na Cannes, bụ ndị bụzi ihe abụọ nke Taittinger Family. Ọ nwere ọnọdụ nke Director nke Ahịa, Ahịa na Nkwukọrịta maka ụlọ nkwari akụ abụọ nwere onwe ha, Hotel Royal Riviera na Saint-Jean Cap-Ferrat na Hotel Metropole Monte-Carlo. Na 2011, a họpụtara ya ka ọ bụrụ onye isi nke Mgbakọ Mgbakọ Monaco ma bụrụ onye na-ahụ maka nkwalite na mmepe nke MICE, ebe ọ na-etinye usoro nkwukọrịta ọhụrụ na azụmaahịa yana ịkwụsi ike n'akụkụ ndị ahịa kacha mma.
Oriakụ Camia gbasara nhọpụta ya dị ka onye osote onye isi: “Ọ bụ ihe ịma aka ọhụrụ na ịmara ọrụ rụzuru na Bureau of Convention. Afọ asaa a gara aga enwewo ọtụtụ ahụmahụ na ihe ịga nke ọma. ”
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na Finance Engineering na Nice-Sophia-Antipolis University, Maazị Antognelli malitere ọrụ ya na enyemaka nke Monegasque nke ụlọ akụ Switzerland, nke mbụ na ụlọ ọrụ azụ wee banye na njikwa ihe egwu na ngalaba nyocha nke ime obodo.
N'ime afọ 10 sochirinụ, o nyere aka na mmepe nke ụlọ ọrụ mkpuchi na Monaco, na-ejikwa njikwa ahịa ndị ahịa dị elu na-eji ọkachamara ego yana yana mmekọrịta ọha na eze.
Na 2011, a họpụtara ya Isi nke Ngalaba Statistics nke Monaco Government Tourist & Convention Authority. O tinyela aka na mmepe nke ọrụ a ma gbasaa usoro ọrụ ya na ọgụgụ isi na asọmpi asọmpi.
Na 2015 ọ were ọnọdụ nke osote onye isi ma rụọ ọrụ na mmechi mmechi na ọrụ niile maka ịkwalite na ịzụlite njem nleta na Onye isi.
Mazi Antognelli banyere nhọpụta ya dị ka Onye isi ala: Nhọpụta a bụ mmata nke ọrụ m yana nkwupụta ntụkwasị obi sitere n'aka gọọmentị. Ana m atụ anya iso ndị otu na-arụ ọrụ iji kwalite ebumnuche ma nweta nnukwu nsonaazụ n'oge gara aga.
Ebumnuche m bụ iduga ozi niile nke Monaco Government Tourist & Convention Authority iji hụ ọkwa dị elu nke njem na afọ niile ma bulie uru akụ na ụba maka ebe a.
Anyị na ndị mmekọ niile na-arụkọ ọrụ oge niile na mpaghara ndị njem nke ndị isi.
Anyi aghaghi idozi ngwa oru ohuru n'ime usoro enyere maka ikwalite ebumnuche a, iji melite nsonaazụ ọma nke njem nlegharị anya na Onye isi. ”
ụdị ụlọ ọrụ Cannes okpu ọrụ ịma aka ụgwọ emechi nkwurịta okwu asọmpi mbono ụlọ ọrụ mgbakọ imekọ ihe ọnụ ahịa ngalaba onye osote aku njedebe Engineering ahụmahụ ọkachamara ezinụlọ ego ego -atụ kpuchie mma isi nwere Brandslọ nkwari akụ mma Onwe otutu insurance ọgụgụ isi iduga iguzosi ike n'ihe okomoko nkwari akụ ezumike hotels Ijikwa ụmụ oke Monaco Mr Nwaanyị onye isi ala ohuru Nice ụlọ ọrụ iji Paris mmekọ gara aga ọnọdụ post onwe Kwalite akwalite nkwalite Njirimara mmata pụta ọgaranya n'ihe ize ndụ njikwa ihe ize ndụ Riviera eze Saint sales akuku na-eje ozi Asaa nkà -elekọta mmadụ okwu ọnụ ọgụgụ usoro ike Switzerland ngwaọrụ ngalaba njem mahadum eji nabatara Arụ ọrụ